Looking For A Change? Jobs in Myanmar | JobNet.com.mm
Address : Centrally Located,Yangon, Myanmar
Looking For A Change? jobs and Career Profile
ဒီ Company မှာ အလုပ်လုပ်ရခြင်းကတော့ organization ကြီးမားခြင်း။ Worldwide အထိသွားနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ခြင်း။ Company ကိုအများပိုင် company ဖြစ်စေချင် ။ Company ရဲ့ အကျိုးအမြတ်ကို customers နှင့်မျှဝေ ခံစားချင်။ ဥပမာ- Company ရဲ့ Product or Services ဝယ်ယူသူတွေကို company ရဲ့ အကျိုးအမြတ်ကိုလည်းပဲ share ရောင်းချပေးခြင်းဖြင့် customer တွေကို အကျိုးပြုပေးချင်။ ဒီ organization ကြောင့် အကျိုးအမြတ်ပဲရှိစေရမည်၊ အကျိုးမယုတ်စေရ။
ကျောင်းပြီးကထည်းက Telecom Field ထဲမှာပဲ အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ အခုလည်း Telecom Field ထဲမှာပဲ ဆက်လုပ်ချင်လို့ ဒီ company ကို ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ အနာဂတ်အတွက် ရည်မှန်းချက်တွေကို ဖော်ဆောင်နှိုင်ပြီး နည်းပညာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အတွေ့အကြုံတွေ အများကြီး ရချင်သည်။ တက်သစ်စ လူငယ်တွေကိုလည်း မြေတောင်မြှောက်ပေးနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်သည်။ နည်းပညာနဲ့ ပတ်သက်ရင် အမြဲခြေလှမ်းတိုင်းက သူများထက် သာနေစေချင်၊ နည်းပညာအသစ်တွေ လေ့လာဖို့အတွက်လည်း အဆင်သင့် ဖြစ်နေစေချင်တယ်။ ယခုလို အမြဲ update ဖြစ်နေတဲ့ နည်းပညာတွေကို company ရဲ့ customer တွေကို အမြဲ သူများထက်အရင် ထိတွေ့သုံးစွဲစေချင်သည်။
New project တွေမှာ ပါဝင်ချင်၊ Telecom နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရမည်ကို ယုံကြည်ခြင်း၊ Product Launch အချိန်မှီလုပ်နှိုင်ရန် တခြား Department များကို support လုပ်ပေးရခြင်းကို နှစ်သက်ခြင်း။ အနာဂတ်မှာ မိမိတို့ organizaiton မှ အသစ်အသစ်သော နည်းပညာတွေကို ပြည်သူတွေကို အမြဲတမ်း အချိန်မှီ ပေးချင်တယ်။
We areasmall, fast-paced startup with the expertise ofalarge Myanmar conglomerate.
We are in the process of recruiting the team who will take our company from an idea toareality, and who will bring our new portfolio of internet-related products and services to the people of Yangon and Mandalay in the coming year.
We will build this brand and company together. You will beapart ofapassionate group of smart innovators who will haveachance to makeareal difference in the way Myanmar connects and communicates in the future.
All Looking For A Change? Jobs
Own-Stores Sales Agent
Sales Supervisor ( Direct Channel )
Assistant Manager – Finance Depatment
Analyst – Reporting , Forecasting & Bud
Sales Executives - B2B Sales
Warehouse Supervisors - Mandalay
Channel Service Desk Administrator
HQ Service Desk Administrator